Fanazavazavana fohy sy tsotra araka izay azo atao angaha aloha no atao. Misy karazany roa araka ny fahazoako azy ny hetra fandoa isantaoona raha ity volavolana tetibolam-panjakana ity noresahina. Ny voalohany dia antsoina hoe hetram-panjakana ka voaray ao ny hetra amin’ny vola miditra (amin’ny tombom-barotra, ny vola miditra isam-batan’olona ary ny fikambanana) sy ny toa azy (solika,…) , ary io dia antsoina hoe hetra amin’ny vola miditra ka arotsaka ao amin’ny tetibolam-panjakana ankapobe. Ny karazany faharoa kosa dia antsoina hoe hetra tambatra izay voriana ao amin’ny tetibola ankapoben’ny fanjakana ihany fa ny vola azo amin’io dia omena ny faritra ny 40% ary ho an’ny Kaominina kosa ny 60%. Ny olona ampiharana ity hetra faharoa ity dia ireo ao amin’ny orinasan’olo-tokana na miasa ho an’ny tenany ka nby vola matiny, miditra ankapobeny dia latsaka na farafahabeny mahatratra ny Ar20.000.000 ao anatin’ny taona izany hoe amin’ny ankapobeny dia mpiompy, mpamboly, mpanjono, mpanao asa tanana, mpivarotra, mpanao asa tena,mpanakanto sy ny karazany, ny mpanao hanimasaka na misy na tsy misy trano ary ny mpitondra taxi.
Na ny hetram-panjakana na ny hetra tambatra dia mitovy ihany ny taha alaina arakaraka ny vola miditra. Toy izao manaraka izao izany: Hatramin’ny Ar100.000 dia akana Ar200, hatramin’ny Ar140.000 dia akana Ar500 ho hetra, hatramin’ny Ar160.000 akana Ar2000, hatramin’ny Ar180.000 akana Ar4000, ny mihoatra ny Ar180.000 dia akana hetra 25% amin’ny karazan-ketra voalohany sy faharoa. Mazava loatra fa raha miohatra tamin’ny taloha izay misy ambaratonga dia tena lasa tsotra kokoa ny fikajiana ny hetra saingy eto amin’izay ilay mahatonga ny lohateny hoe matematika vaovao.
Mba mikajikajy tsinona ka mahita izao karazana fampimirana izao:Rehefa afaka ny hetra dia mitovy ny vola raisin’ny mpandray vola andeha atao hoe mpikarama isam-bolana Ar180.000 sy Ar235.000 fa raha nakana vola Ar4000 ilay Ar180.000 dia nakana vola Ar58750 kosa ilay mpikarama Ar235.000. Mifandrindra amin’izay ihany dia mandray vola ambany noho ilay mandray Ar180.000 avokoa izay mpikarama mandray vola anelanelan’ny Ar181.000 ka hatramin’ny Ar234.000. Karazana Kominisma vaovao angamba izy ity na mety hahalatsaka ny orinasa hifanaraka amin’ny mpiasa manana ireo karama anatin’ireo vanim-bola ireo “hampihena” ny karamany, izay tsyazo atao mihitsy araka ny lalàna nefa mety ho eken’ny mpiasa rehefa resy lahatra izy. Ankoatra ny karama sy ny hetrany manko dia manana adidy aloa amin’ny Cnaps sy ny Ostie ihany koa ny orinasa ka ireo no hanakana ny lehiben’ny orinasa tsy hanondrotra ny karaman’ny mpiasa mihitsy raha ohatra ka tiany ihany ny hitazonan’ny mpiasa hitovy amin’ny taloha ny vola raisiny.
Ny olona mpandray Ar220.000 tsy afa-ketra dia manana Ar165.000 rehefa noesorina ny hetrany. Ny olona mpikarama tsy afa-ketra Ar200.000 dia efa mionona amin’ny Ar150.000 sisa, nefa ny mandray Ar160.000 no analana Ar2000 ka lasa Ar140.000 no azony ka Ar10.000 sisa elanelam-bola. Ny mpandray vola Ar190.000 dia mifaly amin’ny Ar142.500 fa ny mpikarama Ar140.000 dia Ar139.500 no raisiny izany hoe Ar3000 no elanela-karama raisina. Ary ny mpandray Ar181.000 izay voa mafy indrindra dia efa mikajy soa aman-tsara fa Ar135.750 no raisiny izay efa ambanin’ilay mpikarama Ar140.000 voalaza eo ambony. Ny hany ny tsy fantatra dia ny antontan’isan’ireo mpikarama roa karazany ireo, dia ny mpikarama anelanelan’ny Ar140.000 sy Ar180.000 andaniny sy ireo mpikarama Ar181.000 ka hatramin’ny Ar235.000 ankilany. Ao amin’ny sokajy farany voatonona (izay misy ahy) ity dia efa karazany mihena avy hatrany ny karama raisina ankoatra ny tsy maintsy hamindrana ny karama any amin’ny banky, voafaritra anaty lalàna izany, izay tsy maintsy haka ny anjarany ihany koa na dia ilay hoe isam-bolana fotsiny aza. Ny fifanarahana amin’ny mpampiasa amin’ny vola aloan’ny orinasa dia famelezana ahy ihany rehefa ho retirety aho. Ny fahavoazako angamba dia noho izaho mampitaha ny karamako amin’ny sokajy hafa avy hatrany.
Fa ankoatra izany kajikajy rehetra izany dia ahitana ny ao an-dohan’ny mpitondra fanjakana amin’ny fitantanana ny Kaominina ihany koa ilay hampiasana ny vola. Ao amin’ny hetra tambatra dia voamarika mazava tsara fa voriana ao amin’ny tetibola ankapoben’ny fanjakana ihany fa ny vola azo amin’io dia omena ny faritra ny 40% ary ho an’ny Kaominina kosa ny 60% avy eo. Mampahatsiahy avy hatrany ny nanjo ny tanànan’i Fianarantsoa sy Toamasina tamin’ny fe-potoana farany teo. Rehefa tsy ny ao amin’ny Antokoben’ny fitondrana no hitantana ny Kaominina dia tsy ho azo itokisana na oviana na oviana ny hahazoan’ny Ben’ny tanàna ny anjara fampandehan-draharaha na mety ho fanorenana foto-drafitrasa ankoatra ny hoe efa miomana ny handany vola am-paosy izay Ben’ny tanàna ho voafidy eo. Dia samy hahita ihany koa ny be sy ny maro raha toa ka tsy ny atolotry ny TIM no ho lany eto. Ho sahin’ny eo amin’ny fitondrana ve ny tsy hanome mihitsy izay Ben’ny tanàna eto raha toa ka tsy Atoa hery Rafalimanana no lany eto?